နိုဗယ်ဆုပေးပွဲတွင်.. ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောကြားခဲ့သော မိန့်ခွန်း စဆုံး | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
Aung San/Aung San Suu Kyi » နိုဗယ်ဆုပေးပွဲတွင်.. ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောကြားခဲ့သော မိန့်ခွန်း စဆုံး	21
Kai has written 659 post in this blog.
Moe Z says: ဘာသာပြန်ပေးတဲ့ ဒေါက်တာကောင်းမြတ်ကျော်နဲ့ တင်ပေးတဲ့သဂျီးကိုကျေးဇူးပါ ..
Oo Oo says: အမေစုကိုလေးစားပြီးရင်း လေးစားရပါတယ်
kyeemite says: ကျေးဇူးအထူးတင်ရုံတင်မက သဂျီးနိုင်ငံ့သားကောင်းတစ်ယောက်
အဂျစ် says: ဒီမှာ ပရင့် ထုပ်ပြီဖြန့်မှာ အခုစပြီဗျာ
ဆူး says: ဘာသာပြန် မိန့်ခွန်းလေး အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
စိန်ဗိုက်ဗိုက် says: ယမန်နေ့ က ဖွတ်ချက်ဖွတ်ကွန်နက်ရှင်နဲ့ဆုချီးမြှင့်တဲ့အခမ်းအနား အဖွင့်လေး ကြည့်မိသဗျား..
pan pan says: ဘာသာပြန်ပေးတဲ့ဆရာကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
“”"ဒီဆုဟာကျွန်မကို မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဒီမိုကရေစီ နှင့်လူ့အခွင့်အရေး အတွက် လှုပ်ရှား ရုန်းကန်ရာမှာ ကမ္ဘာရဲ့ အာရုံစိုက်မှုကို ရစေပါတယ်။ ကျွန်မတို့ကို မေ့မသွားကြပါဘူး။”"”
marblecommet says: ဘာသာပြန်ပေးတဲ့ ဒေါက်တာကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
kyawtheinmyint 23 says: ကူးထားလိုက်ပါတယ်၊ ပြီးတော့ သူကြီးနှင့် ဘာသာပြန်ပေးသူကိုပါ ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။
padonmar says: ဒေါက်တာကောင်းမြတ်ကျော်ရဲ့ ဘာသာပြန်တော်တော် ကောင်းပါတယ်။
padonmar says: ကြင်နာတတ်သော ပါ။
ဇောက် ထိုး says: ““ငြိမ်းချမ်းဆိုတဲ့ စကားနှစ်လုံးကပဲ တိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်ရင် မီးငြိမ်းသွားတဲ့အခါမှာ ဖြစ်တဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့အေးချမ်းမှုလို့ ဆိုပါတယ်။””
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 5327
MaMa says: ဘာသာပြန်ထားတာ တင်ပေးလိုက်လို့ ငါ့တို့သဂျီးဒီတခါတော့ ကြိုးစားလှချည်းလားလို့ ချီးကျူးမလို့ပဲ ရှိသေးတယ် :P
တင်ပေးတဲ့ သဂျီး ကိုလည်း ထို့နည်းလည်းကောင်းပါ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 9968
မောင်ပေ says: သဂျီးရေ
ရဲစည် says: အသေအချာ ခံစားပီးဖတ်ဖို့ ကူးသွားပါတယ်။
padonmar says: ဒေါ်စုက မြတ်စွာဘုရားရဲ့ တရားတော်ကို reference လုပ်ပြီး ပြောသွားတယ်နော်။
YE YINT HLAING says: ပြည့်စုံ ကောင်းမွန် တဲ့ မိန့်ခွန်း ကို ပြောကြား သွား တဲ့ အမေစု နဲ့ အတူ ဘာသာပြန်ပေးတဲ့ ဒေါက်တာ ကောင်းမြတ်ကျော် နဲ့ တင်ပေးတဲ့ သဂျီး ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင် ဗျာ ၊ ကျန်ရှိနေ သော နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား များလည်း အမြန်ဆုံး လွတ်မြောက် ကြပါစေ၊၊၊ လူ အချင်းချင်း နှိပ်စက် ညှဉ်းပန်း သတ်ဖြတ် နေချင်းမှ လည်း ကင်းဝေးကြပါစေ၊ တကဘာ လုံးမှာ ရှိတဲ့ မိသားစုများ အေးချမ်းပျော်ရွှင်စွာ အတူတကွနေထိုင်လုပ်ကိုင် နိုင်ကြပါစေ၊
aye.kk says: ထောင်တန်တဲ့စကား….
Azzurri says: ဘာသာပြန်ပေးတဲ့ ဟိုဒေါက်တာကိုလည်းကျေးကျေး…
Azzurri says: ဗျို့ သဂျီး …
Comments By Postမန်းဂဇက် ကဗျာချစ်သူများ၏ ကဗျာပြခန်း (ပြခန်းအမှတ် တစ်) - Mr. MarGa - Mr. MarGaလုမ္ဗိနီ သာမော အင်ကြင်းတောသို့..... - မောင် ပေ - Ma Ma``အဖေမေးတော့ ဖြေခဲ့တယ်´´ - မောင် ပေ - စနေနေသာသောနေ့တစ်နေ့ ဖြစ်လိုက်ချင်သည် အပိုင်း (၁၅) - lele kyi - မောင် ပေစဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၅၃ ) ( ဆော်ထည့်လိုက်စမ်းပါ ၊ ဘာသာရေး ) - မောင် ပေ - ခင် ခသန့်ချင်ယောင်ဆောင်ထားတဲ့မြို့ကြီးတစ်မြို့ အကြောင်း - TNA - အလင်း ဆက်Sakura Tower5ထပ်မှာ ဖွင့်လှစ်ထားရှိတဲ့ J-SAT အမည်၇ ဂျပန်ကုမ္ပဏီ - Lay Pai -etoneမောင်ပေ ရဲ့ ပုံတိုပတ်စများ -etone - may july“သဘာဝအလွမ်းမင်းသားကြီး (ဦးကြင်ဥ)” ရှေးကဗျာများပြန်လည်ကူးယူဖ်ာထုတ်ခြင်း အမှတ် (၈) - ko pauk mandalay - ခင် ခ“ရှေးရှေးက ဆင်ဖြူရှင်မနန်းမတော်မိဘုရားခေါင်ကြီးကောင်းမှူ့ အခုမှာတော့ကျောင်းအိုအို” - ko pauk mandalay -etone``ရွာထဲမှာ ဆုံကြတာပေါ့´´ - ခင် ခ - Ma Maအတု - ခင် ခ - kyeemiteရွာသူ/သားများ အတွက် -etone - ရဲစည်ဘုံဆိုင်အတွင်းမှ မှတ်သားဖွယ်ရာ -etone - awra-choဘ၀မှာ ဘာအရေးကြီးဆုံးလဲဆိုတော့..... - ခင် ခ - kyeemiteအယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း ( မေ ၂၀၁၃) - pazflor - ဦးဦးပါလေရာမြေမျိုပျောက်ကွယ်ခြင်း - ko pauk mandalay - padonmarComment မှာ လူစည်ချင်ရင် (ယတြာ) - မဟာရာဇာ အံစာတုံး - Foreign ResidentEast West Dental	PACE	Western Union	Category	Arts & Humanities